परिवार नियोजनका अस्थायी साधन : जति धेरै जानकारी, उति कम प्रयोग | NiD - News
कस्ता दम्पतीले धेरै बच्चा जन्माउँछन् ? सहजै उत्तर आउँछ– अशिक्षित । यो त सही जवाफ हो, योसँगै अर्को प्रश्न पनि आउँछ । उसो भए परिवार नियोजनका आधुनिक साधन र सेवाको प्रयोग कस्ता वर्गका दम्पतीले बढी गर्लान् ? पहिलो प्रश्नको जबाफको आधारमा तपाईंको उत्तर ‘शिक्षित दम्पती’ ले भन्ने आयो भने त्यो गलत हुन्छ ।